MX-19.3: MX Linux, DistroWatch Number 1 Distro emelitere | Site na Linux
MX-19.3: MX Linux, emelitere nọmba DistroWatch 1
Nyaahụ, November 11 2020 ọ bụ ụbọchị dị ukwuu nye ndị ahụ niile nwere mmasị Linuxeros na ha na-eji na / ma ọ bụ na-eso trajectory nke Linux MX, na GNU / Linux Distro nke dị kemgbe ogologo oge, nke mbụ n'ime ogo site na webusaiti a ma ama nke DistroWatch.
La mbipute ma ọ bụ melite wepụtara n'okpuru aha «MX-19.3»Na-ewetara anyị ihe ịtụnanya na ozi ọma bara uru anyị ga-ekwuwapụta n'akwụkwọ a.
Tupu ịbanye n'ụzọ zuru ezu ikwu okwu na akụkọ agụnyere na MX-19.3, ọ bara uru ịkọwa nkenke maka ndị na-abụghị ndị ọrụ ma ọ bụ ndị na-eso ụzọ Linux MX, nke bu:
"A GNU / Linux Distro mere nkwado n'etiti obodo antiX na MX Linux. Ma ọ bụ akụkụ nke ezinụlọ nke sistemụ arụmọrụ ndị ezubere iji jikọta kọmpụta mara mma ma rụọ ọrụ nke ọma na nkwụsi ike dị elu na arụmọrụ siri ike. Ngwaọrụ eserese ya na-enye ụzọ dị mfe iji rụzuo ọtụtụ ọrụ, ebe Live USB na ihe osise foto sitere na antiX na-agbakwunye nnukwu ọrụ na ikike nrụpụta dị mma. Na mgbakwunye, ọ nwere nkwado dị ukwuu site na vidiyo, akwụkwọ na ebe enwere ezigbo enyi".
Ee, mgbe ị gụsịrị akwụkwọ a ịchọrọ ịmatakwu banyere Linux MX, anyị na-agba gị ume ka ị gụọ nke anyị ikpeazụ metụtara post banyere bliss GNU / Linux Distro, na njikọ dị n'okpuru:
1 MX-19.3: mmelite November 2021
1.1 Kedu ihe MX-19.3 wetara anyị ọzọ?
1.2 Gịnị ma ọ bụrụ na ejirila m MX-19.X ma ọ bụ MX-18.X?
MX-19.3: mmelite November 2021
Dị ka ndị mmepe ya si kwuo, MX-19.3 es:
"Mmelite nke atọ nke MX-19, nke mejupụtara mmezi ahụhụ na mmelite ngwa ebe ọ bụ na mbụ anyị bụ MX-19. Ọ bụrụ na ị na-agbazi MX-19, ọ dịghị mkpa ịtinye ya ọzọ. Nchịkọta niile dị site na ọwa mmelite oge niile".
Kedu ihe MX-19.3 wetara anyị ọzọ?
na blog na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị anyị depụtara ndị na-esonụ ihe dị ọhụrụ banyere MX-19.3 site na ọtụtụ ndị ọzọ gụnyere:
Maka ọkọlọtọ nsụgharị nke MX-19.3 (32-bit na 64-bit) ọhụrụ kernel si Debian GNU / Linuxya bu, Kernel 4.19. Na ihe dị iche, na ugbu a kernel ga-emelite na-akpaghị aka yana ihe ndị Debian. Ebe, maka alaka ụlọ ọrụ nke ISO AHS (Advanced Hardware Nkwado) na ISO n'okpuru KDE Plasma, a Kernel 5.8, tebụl 20, na ngwungwu ngwa ngwa ọhụụ emelitere.
Maka nsụgharị niile na ISOs gụnyere mmelite kachasị ọhụrụ dị na Debian GNU / Linux 10.6 (Buster) na Ebe nchekwa MX nke aka ya.
Ngwa ndị bụ isi ga-abịa n'ụdị ndị a:
Ndebanye aha: 4.14
ISIOKWU: 18.3.6 na 20.1.8 maka ISO AHS.
Kernel Debian: 4.19 na 5.8 maka ISO AHS.
Ihe nchọgharị Firefox: 82
VLC Onye ọkpụkpọ vidiyo: 3.0.11
Thunderbird ahịa email: 68.12.0
Office suite: LibreOffice 6.1.5 tinyere ndozi nche.
Otú ọ dị, na Ebe nchekwa MX, ị ga-ahụ dị ka ọ dị na mbụ ọtụtụ ndị ọzọ mpụga ngwa dị ka FreeOffice 7.0 na nwaafọ MX, si 19.2 mbipute, nke a pụrụ ịkpọ ndị na-esonụ:
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere MX-19.3 na DistroWatch pịa ndị na-esonụ njikọ.
Gịnị ma ọ bụrụ na ejirila m MX-19.X ma ọ bụ MX-18.X?
Ọ bụrụ na ị bụworị onye ọrụ nke a pụrụ iche GNU / Linux Distro, echefula ịgụ njikọ na-esote otu esi emezi usoro ziri ezi nke imelite ya, iji nweta usoro Mbugharị na-aga nke ọma: MX Linux Mbugharị.
Ma ọ bụrụ na ị bụghị, onye ọrụ nke Linux MX, ewepụla ya na nke mbụ site na aha koodu ya "Ezigbo Duckling" na minimalist na Desktọpụ dabere na XFCE, ebe ọ bụ na, na-enwe obi ụtọ GNU / Linux Distro y Ebe obibi Desktọpụ, ị pụrụ ime ka pụrụ iche customizations na optimizations, dị nnọọ ka onye ị na-ahụ, na ihe oyiyi ozugbo n'elu. Ma na inwere ike igbanwe ihe ndia niile onye, ​​installable na ndụ respin (ndụ), ezigbo maka ojiji na a Pen mbanye.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «MX-19.3», mbipute ohuru ma obu mmelite di nke Linux MX, na GNU / Linux Distro nke ahụ ka nọ n'ọnọdụ mbụ na ogo site na webusaiti a ma ama nke DistroWatch; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » MX-19.3: MX Linux, emelitere nọmba DistroWatch 1
PLATYPUS: mwakpo ọhụrụ nke na-emetụta ma INTEL na AMD
Sava raara onwe ya nye: otu esi ahọrọ ihe ziri ezi maka ikpe gị